Semalt SEO को कला
खोज इञ्जिन अनुकूलन प्रविधिको
मूल पृष्ठ तत्वहरू
ब्याकलिinking्क र इन्टरलिinking्क
तपाईंको SEO उत्पन्न वेबसाइट प्रदर्शन ट्र्याक गर्नुहोस्
एसईओ गुगल र अन्य खोज इञ्जिनहरूमा उच्च श्रेणीकरण गर्न चाहने प्रत्येक वेबसाइटको लागि महत्त्वपूर्ण छ। के तपाइँ तपाइँको वेबसाइट खोज सर्च ईन्जिनमा बढी देखिनको लागि खोजी गर्दै हुनुहुन्छ? खैर, बोर्ड मा स्वागत छ। एसईओ पूर्ण रूपमा अधिकतम बनाउन, तपाइँले एसईओको आधारभूत कुरा बुझ्नुपर्दछ, र कसरी सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसनको सदा विकसित हुने नियमहरूको साथ अपडेट रहन।
यसले यो सुनिश्चित गर्दछ कि तपाइँको वेबसाइट सँधै उच्च स्थानमा पर्दछ। तलको गाईडले तपाइँलाई एसईओ को कला को माध्यम बाट राख्नेछ, र धेरै पहिले, तपाइँको वेबसाइट जहाँ तपाइँ चाहानुहुन्छ हुनु पर्छ।
SEO भनेको खोज इञ्जिन अनुकूलन हो। वेबसाइट वा वेब पृष्ठको र्या ranking्कन र खोजी ईन्जिनको भुक्तान नहुने नतिजामा दृश्यता बढाउन विविध प्रविधिहरू प्रयोग गर्ने प्रक्रिया हो। सम्पूर्ण SEO ले तपाइँलाई तपाइँको वेबसाइटलाई अगाडि धकेल्न मद्दत गर्दछ, जसमा ट्राफिक बढ्दैछ।
तपाइँको साइटलाई उचित ढing्गले स्थितिमा राखेर, तपाइँको साइटले Google, बिंग, मोजिला फायरफक्स, र मनपर्ने जस्ता खोज इन्जिनहरूमा लगातार उच्च रँकिंग अनुभव गर्दछ। साथै, तपाईंको पृष्ठले विज्ञापनबाट उत्पन्न क्लिकहरूमा जैविक क्लिकहरूको एक बाढीको साक्षी दिनेछ। मेट्रिक्स र वेबसाइट मूल्यांकनले तपाईंलाई प्रवाह अनुगमन गर्न मद्दत गर्दछ।
गुगल र सबै अन्य खोज ईन्जिनहरूले एक परिष्कृत एल्गोरिथ्म प्रयोग गर्दछ वेबसाइट र पृष्ठहरू श्रेणीकरण गर्न। श्रेणीले निर्धारित गर्दछ कि व्यक्तिहरूले पहिले के देख्नेछन् तपाईंको वेबसाइटसँग सम्बन्धित चीजहरूको खोजी गर्दा।
खोजी ईन्जिनहरूले खोजकर्ताको क्वेरीमा लिंक गरिएका सबै साइटहरू प्रयोग गर्दछन्। त्यसपछि तिनीहरू सबैभन्दा प्रासंगिक र उच्च-गुणवत्ता जानकारी र सामग्री पहिलो र दोस्रो पृष्ठ परिणामहरूको लागि चयन गर्नुहोस्।
अधिकतर रूपमा, एल्गोरिथ्म खोजीले क्वेरी र तपाइँको वेबसाइट जानकारीमा आधारित कुञ्जी शब्दहरूको साथ गर्नुपर्दछ। एल्गोरिथ्मले अन्य महत्वपूर्ण विवरणहरू पनि खोजी गर्दछ जस्तै तपाईको पृष्ठमा बाह्य ब्लगको गुणस्तर र वेबसाइट लिंकहरू।
यसले जाँच गर्दछ कि तपाईंको वेबसाइट कसरी व्यस्त छ मान्छेहरूको लागि, कसरी मोबाइल-अनुकूल छ, साइट को लोड गति, र अन्य धेरै मापदण्ड। तपाईंको रणनीतिहरू र प्रविधिहरू प्रयोग गर्न आवश्यक पर्दछ जुन तपाईंको वेबसाइट राख्न SEO निर्देशिकाहरूसँग मेल खान्छन् खोज इञ्जिन अनुकूलित।
१. खोजशब्द लक्ष्यीकरण
यो खोज इञ्जिन अनुकूलनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। यो सब भन्दा महत्त्वपूर्ण छ किनकि कुञ्जी शब्दहरूले व्यक्तिहरूको खोज इञ्जिन क्वेरीहरूको नतिजा निर्धारण गर्छन्। त्यसोभए, तपाइँ तपाइँको वेबसाइट पोष्टहरूको लागि सही कुञ्जी शव्दहरू प्राप्त गर्न सक्नु अघि तपाइँले खोजशब्द अनुसन्धान गर्नु पर्छ। यदि तपाइँको कुञ्जीशब्दहरू राम्रोसँग अप्टिमाइज गरिएको छैन भने, तपाइँको सामग्री अनलाइन रहन सक्छ यसलाई ध्यान दिए बिना।
कसरी सही कुञ्जी शब्द अनुसन्धान गर्ने
प्रासंगिकता: तपाईले यो सुनिश्चित गर्नु पर्छ कि तपाईको सामग्रीको लागि खोजी गर्नु भएको खोजशब्दहरू अनुसन्धानका लागि मुख्य कुञ्जी शव्द हुन्। व्यक्तिले सामग्रीको खोजी गर्दा त्यो किवर्ड टाइप गर्ने सम्भाव्यता के हो? तपाइँ तपाइँको वेबसाइट को लागी तपाइँ को लागी सम्बन्धित शीर्षक को लागी देखाउन चाहानुहुन्छ। यदि तपाईंको साइट अमेरिकामा झोला फेशनको बारेमा छ भने, तपाईंको साइट कोरियामा तरकारी खेतीका लागि नतिजा देखाइनु हुँदैन।
भोल्यूम खोज्नुहोस्: यो तपाईको सामग्रीको लागि खोजशब्दहरू खोजी गर्ने बेलामा तपाईले विचार गर्नु पर्ने चीज हो। तपाईंले कुञ्जी शव्दहरू छनौट गर्नु पर्दछ जुन व्यक्ति प्राय: खोजी ईन्जिनहरूमा टाइप गर्न सक्दछन्। यदि तपाइँ कुञ्जी शव्दहरू प्रयोग गर्नुहुन्न भने, तपाइँको सामग्री डार्करूममा रहनेछ जब यसलाई सहि श्रोताहरूले देख्दैनन्।
तपाईको कुञ्जी शव्दहरूलाई उत्तम रूपमा लक्षित गर्नुपर्दछ; यसले खोजी ईन्जिन एल्गोरिदम देखाउँदछ कि तपाईंको पृष्ठ प्रकाशमा ल्याउन लायक छ। सही कुञ्जी शब्दलाई लक्षित गर्ने सहयोगीहरू, निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईं आफ्नो खोजशब्दहरूको प्रदर्शन विश्लेषण गर्नुहुन्छ तपाईंको सामग्री र यहाँ सम्म कि सम्पूर्ण वेबसाइट अरूको तुलनामा प्रदर्शन गरिरहेको छ। यो प्रयोग गर्नुहोस् Semalt उपकरण तपाइँको कुञ्जीशब्दको प्रदर्शन विश्लेषण गर्न।
२. मूल पृष्ठ तत्त्वहरू
शीर्षक ट्याग तपाइँको वेबसाइटमा बनाउने प्रत्येक सामग्री पोष्टको आवश्यक सुविधाहरू मध्ये एक हो। HTML को अनुसार, यो सामान्यतया H1 तत्त्व हो, जुन हेडलाइन हो।
तपाईंले आफ्नो सामग्री फिट गर्न उद्देश्यपूर्ण रूपमा यो शीर्षक ट्याग प al्क्तिबद्ध गर्न आवश्यक छ। यो तपाईले परिणाम पृष्ठहरूमा देख्नुहुने कुरा हो, त्यसैले यसलाई उचित अप्टिमाइज गर्न आवश्यक पर्दछ। यसले खोजी ईन्जिन एल्गोरिदमले तपाईंको पृष्ठलाई एक व्यक्तिको प्रश्नको लागि जानकारीमूलक स्रोतको रूपमा छान्छ। ताकि तपाईको शीर्षक ट्याग खोज ईन्जिनको लागि राम्रोसँग अनुकूलित गर्न सकिन्छ, ट्याग-55-60० क्यारेक्टरहरू भन्दा लामो हुनुहुन्न।
मेटा पृष्ठ वेबसाइट पृष्ठको अर्को आवश्यक सुविधा हो। सामान्यतया, मेटा वर्णनले तपाईंको पृष्ठको जानकारीको छोटो अवलोकन गर्दछ। मेटा विवरण सँधै देखाउँदैन, कसरी खोजी ईन्जिनको एल्गोरिथ्म काम गर्दछ मा निर्भर गर्दछ।
यदि तपाइँ तपाइँको पृष्ठ पोष्टको एक अनुकूलित मेटा विवरण समावेश गर्नुहुन्छ भने, गुगल र मनपराउनेहरूले यसलाई उच्च श्रेणी दिन्छ। यसको मतलब यो हो कि अधिक व्यक्तिहरू पृष्ठ क्लिक गर्छन् र त्यसैले ट्राफिक बढ्छ।
Alt विशेषताहरू HTML सुविधाहरू हुन् जुन वेबसाइट पृष्ठहरूमा प्रयोग भएका छविहरूका बारे जानकारी प्रदान गर्दछ। धेरै जसो तपाइँको वेबसाइट क्लिक गर्ने व्यक्तिलाई दृश्यात्मक हुँदैन, तर तिनीहरू कहिलेकाँही सबैमा स्पष्ट हुन्छन्। यी Alt गुणहरू पनि खोज इञ्जिन एल्गोरिथ्महरू द्वारा परीक्षण र अवलोकनको लागि प्रयोग गरिन्छ।
यदि तपाइँ तपाइँको छविको लागि राम्रोसँग अनुकूलित वेट प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, यसले खोज इञ्जिनहरूले तपाइँको वेबसाइटलाई खोज परिणाममा उच्च स्तरमा मद्दत गर्दछ। यो किनभने alt गुणहरूले एल्गोरिदमलाई बनाउँदछ कि तपाइँसँग सामग्री छ जुन खोजीकर्तालाई चाहिन्छ। यस कारणका लागि, तपाईंको साइटले छविहरू समावेश गर्नुपर्दछ जुन संक्षिप्त तर जानकारीमूलक तरीकाले वर्णन गरिएको छ।
तपाईंको URL संरचना अर्को महत्त्वपूर्ण सुविधा हो जुन तपाईंले विचारमा लिनु पर्छ। तपाईंको यूआरएलमा इम्बेड गरिएको कुञ्जी शब्दहरूले खोजी ईन्जिनलाई स्तरमा उच्च राख्न मद्दत गर्दछ। यो तपाईंको URL भन्दा तपाईंको पृष्ठ वा पोष्टको बारेमा प्रतिबिम्बित गर्दछ।
उच्च र्याकिंगलाई मद्दत गर्न, तपाईंको URL छोटो र जानकारीपूर्ण हुनुपर्दछ। यूआरएलमा यति धेरै कुञ्जी शब्दहरू प्याक नगर्ने प्रयास गर्नुहोस्, त्यसैले एल्गोरिथ्मले तपाईंको URL स्प्याम यूआरएलको रूपमा अवलोकन गर्दैन। एकचोटि तपाईंको URL राम्रोसँग अप्टिमाइज भयो, तपाईंको एसईओ र्याकिंग सुधार हुनेछ।
तपाइँको वेबसाइट को लोडिंग गति एसईओ को मतलब छ। यदि तपाइँको पृष्ठ बिस्तारै लोड हुन्छ र खोजीकर्ताहरूले अन्तमा ढिलो लोडिंग दरको कारण तपाइँको पृष्ठ छोड्दैछन् भने, तपाइँको पृष्ठ रैंकिंग समयसँगै ड्रप हुन जान्छ। उच्च खोजकर्ता पालो फिर्ता दर, साथै कम खोज इञ्जिन रैंकिंगले तपाईंको पृष्ठ उच्च ट्राफिक गुमाउनेछ।
यसैले तपाईंको पृष्ठ छिटो लोड हुने दर हुनु आवश्यक छ। त्यहाँ विविध कारकहरू छन् जसले तपाईंको पृष्ठ बिस्तारै लोड गर्न सक्छ। के गलत छ भनेर पत्ता लगाउन तपाईं आफ्नो वेबसाइटको रिपोर्ट पृष्ठ प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाई पृष्ठको गति अंक सुधार्न Semalt को सेवा प्रयोग गर्न पनि विचार गर्न सक्नुहुन्छ।
अब जब इन्टरनेट राजा हो, खोज इंजनहरू मार्फत जानकारीको लागि क्वेरी गर्ने सबैजना एक राजा/रानी हुन्। यी राजा र रानीहरूले आफ्नो उपकरणहरूको लागि अनुकूलित नभएको पृष्ठमा समय खर्च गर्दैनन्। खोज इञ्जिन एल्गोरिथ्म यो याद गर्दछ र तपाइँको पृष्ठ को रैंकिंग कम।
तपाइँको वेबसाइट पृष्ठ पहुँच गर्न को लागी कुनै उपकरण फिट गर्न प्रोग्राम हुनुपर्दछ, यो ल्यापटप, एन्ड्रोइड, ट्याब्लेट, इत्यादि हो। यदि तपाइँको वेबसाइट मोबाइल मैत्री छ भने, तपाइँको श्रेणीकरण अझ राम्रो हुनेछ किनकि मोबाइल फोन पहुँचको लागि सबैभन्दा बढी प्रयोग गरिएको उपकरण हो। आजकाल इन्टरनेट। धन्यबाद, Semalt कुनै पनि उपकरणको लागि अनुकूलित छ र अधिकतम दृश्यता को लागी पेज निर्माण गर्न वेबसाइट निर्माण गर्न मद्दत गर्न सक्छ।
Back. ब्याकलिinking्क र इन्टरलिinking्क
तपाईको ब्याकलि and्क गर्ने र एक अर्कासँग जोड्ने संरचना खोज ईन्जिन अप्टिमाइजेसनको एक प्रकार हो। ब्याकलिinking्क बाह्य वेबसाईटबाट लिंक हो जुन तपाईंको आफ्नै साइटमा पाठहरूमा संलग्न छ। इन्टरलिks्कहरू तपाईंको अन्य पोष्टहरूबाट लि the्कहरू हुन् (समान होमपेजमा) जुन तपाईं नयाँ वेबसाइट पोष्टहरूमा जडान हुनुभयो।
लि्कहरूले एल्गोरिदमलाई देख्न मद्दत गर्दछ कि तपाईंको सामग्री मूल्यवान, जानकारीमूलक, र अन्य पृष्ठहरू र वेबसाइटहरूमा लिंक गर्न पर्याप्त मद्दत पुर्‍याउने छ। अप्रासंगिक वा विषाक्त लिंकहरूको साथ तपाईंको सामग्री स्प्याम नगर्नुहोस्; तिनीहरू गुगल को स्तर कम गर्न को लागी गर्छन। Semalt वेबसाइट विश्लेषक तपाइँको साइट को विश्लेषण र तपाइँ लाई खोज ईन्जिन मैत्री हुन अनुकूलन गर्न सक्छ।
Content. सामग्री मार्केटिंग
यो एक यस्तो चाल हो जुन ईन्जिनको स्तर निर्धारणको लागि आवश्यक छ। सामग्री मार्केटिंगको अर्थ यसको मतलब मार्केटिंग आफैं हुनु पर्छ भन्ने होइन। यसको सट्टामा, यसको मतलब यो हो कि तपाईंको पृष्ठमा सामग्री धेरै आकर्षक बनाइने थियो मान्छेलाई काट्न राख्न। यो सम्भवतः सोशल मिडियामा साझेदारी गर्नका लागि पर्याप्त संलग्नताका साथ व्यक्तिले खोजी गरेका थिए।
थप रूपमा, SEO मार्फत सामग्री मार्केटिंगको मतलब यो हो कि तपाइँ तपाइँको साइटको सामग्री सामाजिक रूपमा विशेष रूपमा सामाजिक मिडियामा प्रमोट गर्न विभिन्न विधि र रणनीतिहरूको प्रयोग गर्नुहुनेछ। यो मार्केटिंगको एक प्रभावकारी फाराम हो, र यसले तपाईंको ब्रान्डलाई प्रख्यात बनाउनमा लामो यात्रा गर्नेछ। किनकी, तपाईंको वेबसाईटमा उच्च ट्राफिकको मतलब यो छ कि खोज इञ्जिनहरूले यसलाई उच्च स्तर दिन्छ।
यो किनभने एल्गोरिदमले बुझ्नेछ कि पृष्ठमा सामग्री जानकारीपूर्ण र मान्छे को लागी पर्याप्त आकर्षक छ। यो जान्न पनि लायक छ कि खोज इञ्जिनहरूले सामान्यतया वेबसाइटहरूलाई क्रमबद्ध गर्दछ जुन खोज इञ्जिन परिणामहरूको शीर्षमा सोशल मिडियामा राम्रो गर्छ।
Your. तपाइँको एसईओ द्वारा उत्पन्न वेबसाइट प्रदर्शन ट्र्याक गर्नुहोस्
तपाइँको वेबसाइटको एसईओ प्रदर्शन ट्र्याकिंग एक एसईओ लाभ उठाउन र तपाइँको ब्रान्ड निर्माण बनाउन एक topnotch तरीका हो। यदि तपाइँ तपाइँको साइट को लागी एसईओ आधारित मेट्रिक्स को लागी निगरानी को लागी, तपाइँ कसरी यसको वर्तमान एसईओ अवस्था सुधार गर्न र यसलाई अझ राम्रो बनाउन थाहा छ।
तपाइँको कुञ्जी शब्द श्रेणीकरण मूल्याate्कन गर्न प्रयास गर्नुहोस्। तपाइँको साइटलाई अप्टिमाइज गर्नु अघि कसरी तपाइँको कुञ्जी शव्द श्रेणीकरण थियो भनेर सचेत रहनुहोस्। साथै, तपाईले साइटलाई अनुकूलन गरेपछि रैंकिंग जाँच गर्नुहोस्। त्यस पछि तपाईंको साइटको सामान्य स्थिति कसरी सुधार भएको छ? के तपाइँको खोज इञ्जिन श्रेणीकरण बढेको छ? के तपाईंले आफ्नो साइटको ट्राफिकमा बढुवाको अनुभव गर्नुभयो? के त्यस बेलादेखि तपाईंको नेतृत्व र बिक्री बढेको छ? यी सबै प्रश्नहरूले तपाईंलाई परिवर्तन गरीएको छ र कसरी तपाईं अझ राम्रा चीजहरू बनाउन सक्नुहुन्छ भनेर बुझ्न मद्दत गर्दछ।
तपाईं यी मेट्रिक मूल्यांकनहरू आफैंले गर्न सक्नुहुनेछ, तर यसको लागि एसईओ विशेषज्ञहरूसँग सल्लाह लिनु सधैं उत्तम हुन्छ। एसईओ विशेषज्ञहरु आफ्नो मूल्यांकन मा कुनै कसर छोड्ने छैन। साथै, उनीहरूले तपाईंलाई सफलता-ग्यारेन्टी बूस्टरहरूको प्रस्ताव गर्दछ तपाईंको खोज इञ्जिन स्तर निर्धारणमा सुधार गर्न। Semalt वेबसाइटलाई आवाश्यक पर्ने सबै एसईओ सम्बन्धित चीजहरूको लागि तपाईंको मुख्य प्लग हुनुपर्दछ। Semalt संग; तपाइँको वेबसाइट एक परिवर्तन का अनुभव गर्न बाध्य छ।
माथिको लेखिएको जानकारीको साथ, खोज इञ्जिन अप्टिमाइजेसन (SEO) को कला र यसलाई कसरी तपाइँको ब्रान्ड कायम राख्न प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा बुझ्न सजिलो छ। एसईओको राम्रोसँग प्रयोग गर्नाले तपाईंको वेबसाइट रैंकिंग बढाउन सक्छ र तपाईंको ब्रान्डलाई फर्काउन सक्छ र कसलाई राम्रोसँग Semalt भन्दा यो काम गर्न को लागी! वर्षौंको अनुभव र विशेषज्ञहरूको एक प्रमाणित टीमको साथ, तपाईं आफ्नो एसईओ र वेबसाइटको आवश्यकता खेलमा सबै भन्दा राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ।